Doorasho Muhiim U Ah Mustaqbalka Erdogan Oo Istanbul Ka Dhacaysa |
Doorasho Muhiim U Ah Mustaqbalka Erdogan Oo Istanbul Ka Dhacaysa
Dadweynaha daggan magaalada Istanbul ayaa maanta u dareeraya doorasho ku celis ah ayagoo dib u soo dooranaya maayar cusub kaddib markii bishii March uu kursigaas si la yaab leh ugu guulaystay musharrax mucaarad ah.
Ekrem Imamoglu ayaa ku guulaystay 13,000 oo cod, xisbiga talada dalkaas haya ee AK ayaana sheegay in wax is daba marini ay dhacday.
Mr Imamoglu ayaa ballan qaaday in uu “u daggaalami doono dimuquraaddiyadda” waxa uuna sheegay in uu mar kale ka adkaan doono Ra’iisal Wasaarihii hore Binali Yildirim.
Natiijada doorashadaan ayaa loo arkaa mid muhiim u ah mustaqbalka madaxweyne Erdugan.
Madaxweyne Erdugan ayaa horay maayar uga soo noqday magaalada Istanbul – waa magaalada xuddunta u ah dhaqanka iyo dhaqaalaha Turkiga, waxaana ku nool 15 milyan oo qof – madaxweynuhuna waxa uu badanaa yiraahdaa “Qofkii ku guulaysta maayarka Istanbul ayaa Turkiga oo dhan ku guulaystay”.
Yaa ku tartamaya xilkan?
Mr Imamoglu, waa 49 jir ah, ka tirsan xisbiga calmaaniga ah ee Republican People’s Party ahna maayarka degmo ka tirsan Istanbul oo lagu magacaabo Beylikduzu.
Ninka la tartamaya ee Mr Yildirim ayaa ka mid ah aas aaseyaashii xisbiga Mr Erdogan ee AKP, waxa uuna dalkaas horay uga soo noqday Ra’iisal wasaare intii u dexaysay 2016-kii iyo 2018-kii.
Bishii Feberaayo ayaa loo doortay afhayeenka baarlamaanka cusub, wixii intaas ka horreeyeyna waxa uu soo noqday wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinta.
Magaca Mr Imamoglu aad looma aqoon ka hor intii aanu bishii March isu soo taagin maayarka Istanbul.
Hal ku dhaggii uu doorashada ku galay ayaa ahaa – “Wax kasta waa ay hagaagi doonaan” – oraahdaas oo hididiilo badan galisay dadweynaha magaalada oo uu saameeyey hoos u dhacii dhaqaalaha ee dalkaas ka dhacay.
Markii bishii March la go’aamiyey in doorashada dib loogu celiyo ayaa Mr Imamoglu waxa uu taageero yaashiisa u sheegay “mar kale ayaan guulaysan doonnaa oo aan xuquuqdeenna soo ceshan doonnaa annagoo faraxsan.”
Aqlabiyadda yar ee uu ku guulaystay Mr Imamoglu ee 13,000 cod ahayd kuma aanu qancin Mr Yildirim.
Xisbiga talada dalkaas haya ayaa ku andacooday in codadka la musuqmaasuqay, arrintaas oo keentay in guddiga doorashooyinku ay ay ku celiyaan doorashada Istanbul.
Dadka dhaliilsan tallabadan ayaa sheegaya in cadaadis ka yimid dhanka madaxweyne Erdogan dartiis go’aan kaas loo gaaray.
Maxaa doorashadan Muhiim ka dhigay?
Recep Tayyip Erdogan laftiis ayaa horay u soo noqday maayarka Istanbul – sannadkii 1994-tii.
Waxa uu aas aasay xisbiga AKP sannadkii 2001 waxa uuna soo noqday Ra’iisal Wasaare intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2014, markaas oo uu madaxweyne noqday.
Si kastaba ha ahaatee khilaafka ka dhex taagan xisbiga AKP ayaa haatan bannaanka u soo baxay arrintaas oo ka sii dari karta haddii xisbigu uu doorashadaan ku guuldarraysto.